VIDEO:-WARBIXIIN KA HADLEYSA GABDHA UGUB AH OO KU DHIBAN XERO BARAKACYAAL EE Baydhabo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	VIDEO:-WARBIXIIN KA HADLEYSA GABDHA UGUB AH OO KU DHIBAN XERO BARAKACYAAL EE Baydhabo
written by warsan radio 24/12/2017
Hooyo khadiijo Cali Mukhtaar Waa xaalad murugo iyo xanuun leh oo qof walba oo bani aadam ah durba uu ka damqanayo marka loo soo bandhigo sheekadan ka hadlaysa Nolosha dhabta ah ee haysata xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala duleedka Magaalada Baydhabo gaar ahaan kuwa jilicsan hooyooyinka ilmaha nuujinaya kuwa umalaya iyo ay ku dhaceen cudurada ee aan haysan daryeel caafimaad.
Tani waa Xabiibo Isaaq Macalin oo habeen hore ku umushay Kaamka Dhuur iyo Qalin ee ku yaala duleedka Magaalada Baydhabo. Waa ugub cuniggan ku curuday iyadoo aan la gaynin Isbitaal, sida idiin Muuqata Xabiibo waxaa xabadka ugu xiran Kubeerto Arad dartiis. Dabkooda wuu dansanaa kolkii aan booqanayay iyadana wax ay liqdo jadiinkeeda ma marin biyo mooyee tan iyo markii ay umushay oo Ilaaheey kala keenay.
Aniga iyo kooxdaydii waqtigaas ma haynin wax aan Gabadhan ku caawino, waxaan go’aansanay in aan dib ugu noqono Magaalada si aan ugu keeno wax ay Xabiibo iyo qooyskeeda cunaan isla markaana xirtaan oo ay coowradeeda ku asturato.
Anigoo hoowshii Gurmadka ku jirno ayay nagu soo dhacday in aan la socodsiino arintan Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka D.K.S waxaa noo suurto gashay in aan is helno Agaasimaha wasaarddaas Mr. Liibaan Sheekh Shuceeb waxaana la socodsiinay Xaakladdii aan ku soo aragnay Kaamkii aan booqanay ee Xabiibo Isaaq Macalin ku umushay ee nolol xumada ku haysatay.
Nagama diidin durbadiiba wuu naga aqbalay intii aan sii soconay waaxaa uu agaasimaha nagala sheekaystay xaaladda Xabiibo ee tan hadda wax laga qaban karo.
Dib ayaan ugu soo noqonay anagoo wadno raashiin, biyo nadiif ah oo canugga la siiyo caano iyo dhar iyadoo uu nala socdo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo ka hortagga Masiibooyinka K.G.S.
Waa tan khadiijo Cali Mukhtaar oo ah hooyada Xabiibo Isaaq Macalin oo shidaysa dabkii dansanaa isla markaana ka sheekaynaysa daruufta nololeed ee iyada iyo gabadheeda ku haysata kaamkan iyo sida ay booqashadeenii kadib wax isaga badashay noloshooda.
Kuwani waa dadkii jiiraanka la ahaa Xabiibo oo ka wer helay gabadha ugubka agteedo ku umushay ee u dhiman gaartay gaajada iyagoo ka warqabin balse booqashadii warbaahinta kadib ka war helay oo Xabiibo u gurmanay iyadoo qof walba wixii uu heli klaro ee guriga u yaalay horay gacanta ugu soo qabsaday oo ku wajahay guriga xabiibo.
Sidoo kale waxaa jira haween badan oo uur leh oo ku dhiban kaamaka dhexdooda kuwaasoo u baahan gurmad ka hor inta aysan umulin si aysan u noqon Xabiibo oo kale iyadoo ugubka ah cidlo ku umushay dhaqtar ka’aan iyo gaajo nolosheeda ku weyn lahayd xitaa ologeeda iyagoo ka warqabin.
Waa tan heblo oo la hadlaysa xaaladeeda.
Khadiijo Cali Mukhtaar
Heblo waa gabar …………….sano jir ah iyadoo ugub ah ku umushay Kaamka Dhuur iyo Qalin oo ku yaala duleedka Magaalada Baydhabo iyadoo Isbitaal iyo daryeel caafimaad haysan. Waxaa kaliya aqalka la joogay markii ay umulaysay hooyadeed.
Waxay heblo iyo hooyadeed ku noolyihiin aqal yar oo ka samaysan ulo baako iyo marooyin la isku xirxiray oo aan ka difaaci karin heblo iyo cunugeeda labada habeen jiro dhaxanta iyo darbadda habeenkii dhacayso, balse maalintii un kaga gabaadaan kulaylka Qoraxda.
Lama joogo saygeeda meelna kuma oga jaan iyo cirib halkuu dhigay mudo sideed bilood iyo ka badan, waxaa ugu war danbaysay intii aysan soo barakicin ka hor waqtigaasoo uu u sheegay in aadayo Puntland si uu ugu soo shaqeeyo oo ay uga samata baxaan abaarta ku dhufutay deegaanka.
VIDEO:-WARBIXIIN KA HADLEYSA GABDHA UGUB AH OO KU DHIBAN XERO BARAKACYAAL EE Baydhabo was last modified: December 24th, 2017 by warsan radio
Dhageyso:-Faafahin Weerar Khasaara Dhaliyey Ayaa Ka Dhacay inta u Dhaxeysa Baydhabo iyo Bardaale